Heesaaga caanka ah Udit Narayan wiilkiisa Aditya Narayan oo la xiray iyo sababta – Filimside.net
Heesaaga caanka ah Udit Narayan wiilkiisa Aditya Narayan oo la xiray iyo sababta
Ruug cadaaga dhanka heesaha maqaamka ugu sareeyo ka gaaray Udit Narayan waxaa dhawaanahan sumcad xumo usoo jiidayo wiilkiisa Aditya Narayan.
Aditya Narayan oo ah jilaa iyo heesaa waxaa la dhigay xabsi Isniintii shalay ahayd gelinka dambe markii gaarigiisa nooca raaxada ah uu ku jiiray mooto bajaaj ama tug tug kadibna ay booliska qabteen kadib markii uu goobta ka baxsaday waxaana la dhigay xabsiga.
Aditya Narayan ayaa la sheegay inuu marka hore carraray balse soo laabtay oo uu goobta ka qaaday ninkii mootada watay ee uu dhibka u geestay sidoo kalena Isbitaalka markii uu geeyay ayay booliska xireen.
Shilka wuxuu ka dhacay wadada Lokhandwala, wuxuuna Aditya Narayan gaarigiisa Marcedes-ka ah ku jiiray darawalkii bajaajka waday Rajkumar Baburao Palekar oo 64-jir ah iyo haweeneydii rakaabka ahayd ee mootada saarneyd Surekha Ankush Shivekar oo 34-jir ah waxaana labaduba soo gaaray dhaawacyo sidoo kalena Aditya isagana dhaawac sahlan ayaa gaaray.
Gabahda lagu magacaabo Surekha Ankush Shivekar dhaawac jab gacanta ah ayaa soo gaaray halka darawalkii mootada bajaajka uu miir daboolnay haatana Aditya dacwad dheeraad ah ayaa lagu soo oogay inkastoo xalay gelinkii dambe damaanad xabsiga looga soo daayay.
Aditya Narayan sanadkii hore dhamaadkiisii ayuu Airport asigoo ku sugan la dagaalay shaqaalaha diyaarada si xunna u aflagaadeeyay taasi oo Video laga duubay sidii anshaxa xumeyd ee uu u dhaqmay.
Waxaa Aqrisay 1,119